Ciidanka Turkiga oo hadda duqeynaya Waqooyiga Suuriya - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home News Ciidanka Turkiga oo hadda duqeynaya Waqooyiga Suuriya
Ciidanka Turkiga oo hadda duqeynaya Waqooyiga Suuriya
Ciidamada Turkiga ayaa billaabay howl-galkii militari ee muddada la qorsheynayey ee Waqooyiga Syria, si looga sifeeyo ciidamada Kurdish-ka ee ay ugu yeereen argagixisada.
Madaxweyne Reccep Tayyip Erdogan ayaa ku dhowaaqay billowga howl-galka, oo uu ugu yeeray “Guga Nabadeed”, waxaana uu sheegay in looga dan leeyahay cirib-tirka “halista argagixsada” ee ka dhanka ah Turkey.
Ciidamada Dimoqraadiga Syria (SDF) ee Kurdish-ka ay hoggaamiyaan ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Turkiga ay garaacayaan goobo shacab, taasi oo argagax weyn sababtay.
Howlgalkan militari ayaa billowday maalmo kadib markii Aqalka Cad ee Mareykanka uu si lama filaan ah ugu dhowaaqay in ciidamada Mareykanka ay ka baxayaan gobolka, si ay dhabbaha ugu xaaraan howlgalka Turkiga.
Agaasimaha warfaafinta xafiiska madaxweyne Erdogan Fahrettin Altun ayaa ugu baaqay bulshada caalamka “inay taageeraan dadaallada dib u dhiska iyo xasileynta Turkiga,” waxaana uu sheegay in damaca Turkiga ee Syria uu yahay kaliya “in meesha laga saaro halis muddo fog ay wajahayeen muwaadiniinta Turkiga.”
Previous articleKhudbadii Farmaajo waxay ahayd mid hurin doonta colaad
Next articleSomalia auditor general slams government finances